Ciidamada DF oo looga maaro la' yahay gabdhaha cad cad ee Marka. - Caasimada Online
Home Warar Ciidamada DF oo looga maaro la’ yahay gabdhaha cad cad ee Marka.
Ciidamada DF oo looga maaro la’ yahay gabdhaha cad cad ee Marka.
Waxaa sii kordhaya dhibaatooyin maalmihii ugu dambeeyay ay ka cabanayeen shacabka deggan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose.
Qaar ka mid ah shacabkaasi oo la hadlay Caasimada Online ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda Somalia ee qabsaday magaalada ay laba jibaareen dhibkii ay ku hayeen shacabka, oo ay ka mid yihiin dhac, kufsi iyo dil.
Dhibka ugu weyn ayaa la sheegaya inuu gaarayo gabdhaha deggan magaalada oo badankood kasoo jeeda dadka cad cad, waxaana la sheegay in ciidanku ay mar walba bartilmaameedsadaan gabdhaha.
Gabdho magacooda qariyay sababa la xiriira amnigooda ayaa Caasimada Online u sheegay in xitaa ay dhib ku qabaan inay marraan waddooyinka, oo ay u taagan yihiin ciidanka dowladda, oo doonaya inay si qasab ah kula macaamilaan.
Waxaa lasoo weriyayay dhacdooyin dhowr ah oo xanuun badan, kuwaasi oo ciidamada dowladda ay xilliyo habeenkii ah gabdho badan kufsadeen, halka qaar kalena ay waddooyinkia ku qab qabsdee.
“Haddii aad tahay gabar cad oo aad joogto Marka waxaad ku sugan tahay dhib” ayay tiri mid ka mid ah gabdhihii la hadlay Caasimada Online.
Dowladda Somalia, ayaa illaa iyo hadda aan wax ka qabaneyn ciidamada Dowladda oo qaar ka mid ah dhac, dil iyo kufsi ku haya shacabka goobo badan oo ay maamulaan.